Kushintshe izinto emkhakheni wama bhange | News24
Kushintshe izinto emkhakheni wama bhange
izithombe: zithunyelweUmcimbi webhange lase Thala enxanxatheleni yezitolo Umlazi Mega City ububungazwe uMnuz Malose Kekana, onguSihlalo we-Ithala SOC Limited ; uMnuz Sihle Zikalala, noMnuz Peter Ireland, oyi-CEO yase-Ithala SOC Limited
ABANTU baseNingizimu Afrika abadinga usizo ngokuphathwa kwezimali zabo nokwakha umcebo sebezozithola besebenzisa ibhange elisezingeni eliphezulu.
Ithala SOC Limited lithathe igxathu lokuthuthukisa igatsha lebhange labo elisenxanxatheleni yezitolo i-Mega City eMlazi ukuze amakhasimende abo anethezeke athole nezidingo zawo kalula.
Leli gatsha eselenziwe kabusha libukeka kangcono kanti lenziwe nangendlela yesimanjemanje nobuchwepheshe obusha ukuze kusizakale kangcono amakhasimende.
Ithala SOC Limited eliphethwe ngokuphelele Ithala Development Finance Corporation, okuyisikhungo saKwaZulu-Natal sentuthuko kwezezimali, lizoqhubeka nokuthuthukisa amagatsha alo ngale ndlela entsha ebizwa nge- customer engagement platform emagatsheni alo esifundazweni, lokhu kuhambisana nomgomo walo wokusiza abantu ababengalutholi usizo emabhange ngaphambilini.
Leli bhange elisha linokuningi okuhlukile okubalwa umuntu obingelela amakhasimende awakhombise lapho ezosizakala khona, indawo yokuphumula, izinsiza zobuchwepheshe ezibizwa ngama i-station, indawo yokuphuza amanzi kanye nendawo yomnotho eyaziwa nge-wealth centre lapho amakhasimende engahlanganyela khona uma enemihlangano yezitokfela noma ezofundiswa kabanzi ngokuphathwa kwemali nokwakhiwa kwengcebo.
USandile Xolo, ophethe ezokuxhumana nokukhangisa eThala SOC Limited uthe igatsha elifana naleli linikeza amakhasimende indlela ehlukile yokubhanga ezobathuthukisa.
“Siseskhathini sobuchwepheshe ngakho ke nendlela amabhange enza ngayo eNingizimu Afrika kufanele ishintshe. Ithala SOC Limited lihambisana nokushintsha kwezikhathi ngokusebenzisa ubuchwepheshe obusha nezindlela zesimanjemanje zokusiza amakhasimende ethu.
“Ngaleli gatsha elisanda kwakhiwa kabusha sihlose ukwethula i-Customer Engagement Platform esizoyisebenzisa ukwabelana ngolwazi, ukufundisa nokuthuthukisa amakhasimende ethu, sikhombise ukuthi Ithala lizimisele ukusiza abantu baseNingizimu Afrika baphathe imali yabo baphinde bakhe umcebo,” kusho uXolo.
Konke lokhu kukhombisa ukuthi Ithala SOC Limited lithathe igxathu elikhulu ekufezeni izinjongo zohlelo lwabo lokukhulisa lesi skhungo kubalwa:
· Ukuthola ilayisense egcwele yokusebenza njengebhange ngo-2017
· Ukuwela imingcele ya-KwaZulu Natal
· Ukuqala isisekelo sokuba yibhange loMbuso
Emcimbini obukuleli sonto, umhlonishwa uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha kanye nezeMvelo KwaZulu Natal, uMnuz Sihle Zikalala, uvule leli gatsha phambi kwezimenywa nabezindaba.
“Singene esigabeni senguqulamnotho ebomfutho, lapho kufanele kwenziwe konke okusemandleni ukubuyisela kubantu abamnyama ingxenye yomnotho enkulu eNingizimu Afrika ukuze sizibambele umnotho,” kusho uZikalala.
Uthe ukuhlanganisa abantu kwezezimlai kubalulekile kwinguqulamnotho enomfutho kanti izikhungo zezimali ikakhulukazi amabhange, adinga ukudlala indima enkulu kulolu shintsho.
“Ngiyaziqhenya ngokuthi kunesikhungo sezimali esilizwile leli khwelo sathatha igxathu ekuqaleni le nguqulamnotho enomfutho uhulumeni wethu azama ukuyifeza.
“Leli gatsha elisha, okungelokuqala kwamaningi asazokwenziwa, likhombisa indlela lawa amanye azokwakhiwa ngayo. Lenzelwe ukusiza abantu bakwazi ukuphatha izimali zabo kangcono baphinde bakhe umcebo.
“Izinto ezifana ne-'wealth centre' kanye nezinhlelo zokwabelana ngolwazi, ukufundisa amakhasimende ngokuphathwa kwemali nokwakhiwa komcebo kuzosiza abantu abajwayekile kanye nosomabhizinisi ngamakhono okwakha umcebo, lokhu kuzoqhuba lenguqulamnotho enomfutho esiyifisa kangaka eNingizimu Afrika.
“Leli gatsha liyinkomba yesigaba esisha kwezezimali kubantu ababencishwe amathuba ngaphambilini esifundazweni kanye naseNingizimu Afrika yonkana.
Siseduze nokuthatha izinyathelo eziyaphambili ekuphathweni kangcono komnotho wesizwe.
“Asibumbane seseke lesi skhungo sezimali esiphila inguqulamnotho enomfutho.
Yiso lesi ikhathi soshintsho, asilwenze lolu shintsho ngokubhanga neThala sikhombise inhloso yethu yokuphatha umnotho,” kuphetha uZikalala.
Ithala linezinhelo eziningi zokubhanga zabantu kanye namabhizinisi kanti linamagatsha angu-39 esifundazweni saKwaZulu Natal.
Uma uthanda ukwazi kabanzi vakashela i-website ethi:
www.myithala.co.za, noma ushayele inombolo ethi: 031 366 2500.